घरमा यी ४ काम गर्नुहोस, सदैव लक्ष्मीको वास हुन्छ - Nawalpur Dainik
एप्पल कम्पनीका सीइओ टिम कुकका सफलताका सुत्र
टिम कुक विश्वप्रसिद्ध एप्पल कम्पनीका सीइओ हुन् ।अमेरिकी नागरिक टिम कुकको जन्म सन् १९६० नोवेम्बेर १ मा भएको थियो। टिम कुक भन्दा तल्लो तहमा ८० हजार कर्मचारीले काम गर्छन् । फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार, उनी विश्वकै शक्तिशाली दश सीइओ मध्येका एक हुन् । आफूलाई समलिंगी भन्न नहिच्किचाउने एकान्तप्रेमी उनी फिट रहन, जिम गर्न र साइकिलिङ्ग गर्न मन पराउँछन् ।
टिम कुकका सफलताका सुत्र :
जीवनमा आउने विभिन्न परिस्थिति तथा मोडले गर्दा आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नबन । यदि तिमीले ती परिस्थिति र मोडमा विचलित नभई सही तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँछौ भने ती परिस्थितिले तिमीलाई लक्ष्यमा हिंड्नको लागि अझ धेरै अनुभव दिन्छन्, तिम्रा खुट्टाहरुलाई अझ बलियो बनाउँछन् र मनमा दृढ विश्वास जगाइदिञ्छन् ।
आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि एकजना आफूले मात्र गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसको लागि तिमीलाई एउटा बलियो टिमको आवश्यकता पर्छ । टिममा यस्ता मानिसहरु ल्याउ जसले तिम्रो लक्ष्यलाई बुझ्न सक्छन् , कामलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन् र तिम्रो योजना कार्यन्वयनको लागि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छन् ।
अरु मानिसले राखेका तर्कहरु सुन । तर, ती तर्कले तिमीलाई जता उडाउन चाहन्छन् , त्यतै उड्न आफ्ना पखेटा नफैलाउ । ती तर्कहरु विश्लेषण गर र निर्णय आफैले लिएर आफ्नो यात्राको दिशा तय गर । यसरि उड, जसरि चिल आफ्नै नियममा बेप्रवाह उडिरहेको हुन्छ । आफ्नो नियम आफै बनाऊ ।
अरुको तर्कलाई नमान्नु , स्वतन्त्र हुनु भनेको अनुशासनहीन बन्नु होइन । काममा केन्द्रित बन । आफ्नो कामलाई माया गर । काममा अझ राम्रो कसरि गर्न सकिन्छ भनेर सधै सिक्ने प्रयत्न गर । हरेक दिन आफूमा केही न केही सुधार ल्याउने प्रयास गर ।
काम सक्नको लागि नगर । तिमीले कति काम गर्यौ होइन, तिमीले गरेको कामबाट तिमीले कति उपलब्धि हासिल गर्यौ ? तिम्रो काम कति गुणस्तरीय भयो ? त्यो हेर ।
कोही पनि व्यक्ति शतप्रतिशत ‘पर्फेक्ट’ हुँदैन । अरुबाट केही सिक । अरुको संघर्ष, मिहिनेत, सफलता मात्र होइन उनीहरुको गल्ती, पश्चाताप, असफलताबाट पनि केही सिक । यसले गर्दा तिमीले सही समयमा सही निर्णय लिन सिक्छौ र आफ्नो लक्ष्यमा लागिरहनको लागि प्रेरणा समेत मिल्छ ।
अरुले गरेको जस्तो गर्न खोज्ने, अरुजस्तै बन्न खोज्ने गरेर तिमीले सफलता हासिल गर्न सक्दैनौ । तिमी भित्र जुन क्षमता तथा विचार छ, त्यो कुरालाई बाहिर ल्याऊ । त्यसले तिम्रो छुट्टै परिचय बनाइदिन्छ र सफलताको लागि ढोका खोलिदिन्छ ।
Prevएक्कासि मध्यरातमा ओर्लियो मेलम्ची,गुहार भन्दै घर छोडेर डाँडातिर लागे गाउँलेहरू (भिडियो हेर्नुहोस्)